कसरी थेग्ला काठमाडौंले २५ वर्षअघिको मुसलधारे वर्षा? – ईमेची डटकम
बिहीबार साँझदेखि परेको अवरिल पानीले बाढीपहिरो आउँदा शुक्रबार साँझसम्म देशभरिमा १७ जनाको मृत्यु भएको छ।
यसबीच काठमाडौंमा एक सय १५ मिलिमिटर वर्षा भयो। निरन्तर वर्षाले काठमाडौं उपत्यकामा मात्र तीन जनाको ज्यान गएको छ। बागमती, विष्णुमती नदी कोरिडोर क्षेत्र डुबानमा परेका छन्। हनुमन्तेको बाढी बस्तीमा पसेपछि भक्तपुरमा पनि डुबान सुरू भएको छ।
भक्तपुर नगरपालिकाको सूर्यविनायक राम मन्दिर, बाराहीस्थान, मध्यपुर थिमिको राधेराधे, शङ्खधर चोक, सूर्यविनायक नगरपालिकाको बालकोट, चारदोबाटो लगायत क्षेत्रमा बस्तीभित्र बाढी पसेको छ। शङ्खधर चोकबाट दधिकोट जाने पुल भासिएको छ। मध्यपुरथिमि नगरपालिकाका बिस्कुट कारखाना, तरकारी बजार लगायत क्षेत्र डुबानमा परेका छन्।
आइतबारसम्म वर्षा जारी रहने भएकाले जल तथा मौसम विज्ञान विभागले नदी तथा खोला आसपास क्षेत्रमा सचेतना अपनाउन आग्रह गरेको छ।
यो त मनसुनको सुरूआत मात्र हो। त्यसपछि पनि मनसुन प्रभावले हाम्रो भेगको आकाश रसिलै रहनेछ। यस अवधिमा सिमसिम पानीले आकाशको रस निख्रियो भने ठिकै छ। तर, लामो कालखण्डमा दोहोरिने असामान्य मुसलधारे वर्षा काठमाडौंले फेरि बेहोर्नुपरे के होला?
काठमाडौं उपत्यकाको अहिले नै यो हाल छ, २५ वर्षअघिजस्तो ५ सय ४० मिलिमिटर पानी पर्यो भने यहाँका नदीहरू कस्तरी उर्लिएलान्? नदी आसपासका डोलक्षेत्र पानीमा चुर्लुम्मै डुबेर डाँवाडोला नहोलान्?
यही विषयमा हामीले विपदविद् मधुकर उपाध्यासँग कुराकानी गरेका थियौं।
गत वर्ष असार २८ गते हनुमन्ते खोलामा आएको बाढीले जलमग्न भक्तपुर। फाइल तस्बिर: नारायण महर्जन/सेतोपाटी
‘हामीले पानी बग्ने नदी मिचेर नालामा परिणत गरिदिएका छौं,’ जोशी भन्छन्, ‘अचेल जसरी सामान्य झरीमै हनुमन्ते बहुलाउँछ, त्यस हिसाबले २५ वर्षअघिको जस्तो वर्षा भए काठमाडौं उपत्यकामा कति भयावह अवस्था आउला भनेर हामी सहजै अन्दाज गर्न सक्छौं।’
हनुमन्तेले पोहोर कोटेश्वरस्थित भाटभटेनी डुबाएको थियो।
‘हामी केटाकेटी हुँदा सरस्वतीखेलदेखि बगेर आउने ठूलै खोल्साको ठाउँमा सडक र त्यसैको छेउमा भाटभटेनी बनाइएको रहेछ,’ उनले भने।
त्यति बेला हुलका हुल मानिस आएर ‘हामीलाई डोलक्षेत्र चाहिँदैन’, ‘हाम्रा जग्गामा घर बनाउन पाउनुपर्छ’ भन्दै दबाब दिएपछि सरकारले त्यस्तो निर्णय गरेको प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त भाइकाजी तिवारी बताउँछन्।
राजनीतिक परिवर्तनपछिको अस्थिरता दुरुपयोग गरेर जन्मिएका बेथिति नियन्त्रण गर्नै नसकिएको उनको अनुभव छ। ‘यस्तो बेथितिमा धेरै ठूलो पानी आइदिए के हुन्छ भन्ने त सवालै छैन,’ तिवारीले भने, ‘यी जति पनि डोलक्षेत्र छन्, त्यहाँ दुई–तीन तल्ले घर भएकाहरूले माथि चढेर ज्यान बचाउँछन्। अरूको थाहा छैन।’
प्रकृतिको नियम वर्षौंदेखि अवरुद्ध पारेर हामी आफैंले संकट डाकेको प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त तिवारी बताउँछन्।
बिना इञ्जिनियरिङ तयार भएका यस्ता नालाले समस्या बढाउँदै लगेको उनी बताउँछन्।
यसलाई बुझ्न गत वर्ष मध्यपुर थिमीमा भएको उदाहरण पर्याप्त छ।
जग्गासम्बन्धी यस्ता किचलोमा राजनीतिक दलहरूसमेत मिसिएर परिस्थिति अझ जटिल हुने गरेको छ। प्राकृतिक बहाव बिथोलिएको त्यही खोलामा केही सातापछि भक्तपुरका थुप्रै भेग डुबाउने गरी पानी आएको थियो।
जोशीले काठमाडौंका नदीमा अतिक्रमणको अर्को अनुभव पनि सुनाए।
‘दुवैतिरको नक्सा एकैठाउँ राखेर हेर्दा त धोवीखोलै छैन,’ जोशीले सुनाए, ‘काठमाडौंतिरको नापीनक्सामा धोवीखोला भनेर जुन लाइन तानेको छ, त्यो खोला बगिरहेको ठाउँभन्दा पारि छ। फेरि अर्कोतिर चाबहिलको नक्सा राखेर हेर्दा जग्गाको लाइन उसैगरी खोलाभन्दा पारि छ।’
‘यस्ता उदाहरण त कति छन् कति,’ उनले भने।
प्राधिकरण प्रमुख आयुक्त तिवारीका अनुसार पछिल्लो समय उपत्यकाभित्रका सबैजसो ठूला खोलाको दुवैतिर २० मिटर जग्गामा घर बनाउन नपाइने नियम छ। साना खोलाको हकमा पनि दसदेखि बाह्र मिटर छाड्नैपर्छ।
धोबीखोला लगायतमा पानी बहाव अध्ययन गराएर तटबन्धसहित बग्ने क्षेत्र निर्धारण गरिएको र दुवैतिर कोरिडोर बनाएर यातायात आवागमनको व्यवस्था मिलाउँदै लगेको तिवारी बताउँछन्।
उनका अनुसार प्राधिकरणले मनहरानिम्ति ३० मिटर बहाव क्षेत्र तोकेको छ। बागमतीका हकमा पशुपतिभन्दा माथि २५ मिटर, शंखमूलसम्म ३०, टेकुसम्म ४० र टेकुबाट तल ५० मिटर बहाव क्षेत्र तोकिएको छ।
काठमाडौंले अब जनसंख्याको भार थेग्नसक्ने सीमा पूरा भएको इञ्जिनियरसमेत रहेका जोशी औंल्याउछन्।